Kuwaiti mara mma blogger: Ekwesighi ka nwa odibo Filipino debe paspọtụ ya
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ihe Ndị Ruuru Mmadụ » Kuwaiti mara mma blogger: Ekwesighi ka nwa odibo Filipino debe paspọtụ ya
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • News • Ozi Na -agbasa Ozi Philippines • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
by Onye Isi Nchịkọta Ọrụ
dere Onye Isi Nchịkọta Ọrụ
Onye na-ede blọgụ mara mma nke ndị Kuwaiti na-eche nkatọ kpụ ọkụ n'ọnụ ihu banyere nkatọ ọ na-akatọ iwu ọhụrụ nke mere ka ọnọdụ ọrụ nwa agbọghọ Filipino ya ka mma.
Otu onye na-ede blọgụ mara mma nke Kuwaiti na-eche nkatọ kpụ ọkụ n'ọnụ banyere nkatọ ya banyere iwu ọhụrụ nke mere ka ọnọdụ ọrụ nwa agbọghọ Filipino ya dịkwuo mma.
Onye na-ese ihe eji eme ihe bụ Sondos Alqattan gosipụtara iwe ya na vidiyo nke ya na ụmụazụ ya ruru 2.3 na Instagram. N'ime ya, ọ kwara arịrị banyere eziokwu ahụ bụ na a ga-ahapụzi "ndị odibo" ya ka ha debe akwụkwọ ikike ngafe ha, na-eme ezumike kwa awa ise ma nwee ezumike otu ụbọchị kwa izu.
“Kedụ ka mmadụ ga - esi debe odibo n’ụlọ ya ma ghara idebe paspọtụ ya? Ọ bụrụ na ọ pụọ ma ọ bụ pụọ otu ụbọchị, onye ga-akwụ m ụgwọ?, ”Ka ọ jụrụ, na-ezo aka na ego ụfọdụ ndị ọrụ na-akwụ iji kwụọ ndị ọrụ na Kuwait. “N’eziokwu, ekwetaghị m iwu a. Achọghịzi m nwa agbọghọ Filipino ọzọ. ”
Sondos nọgidere na-enweghị mgbagha maka nkwupụta ahụ na Mọnde, na-eziga nkwupụta na mgbasa ozi mgbasa ozi na-azọrọ na ọ na-emeso ndị ọrụ ya ihe n'ụzọ ziri ezi ma na "anaghị etinye ogologo oge ọrụ." Mana, o kwughachiri na nkwenye ya na ekwesighi ka ndị ọrụ hapụ akwụkwọ ikike ngafe ha.
Ihe ndị a kwuru kpasuru iwe na ntanetị na n'etiti ndị na-ede blọgụ na Middle East na Philippines, na ọtụtụ na-atụle ọgwụgwọ ya nke ndị ọrụ na ịgba ohu nke oge a.
Ọtụtụ ụdị ndị mara mma ebiela ugbu a na Instagram 'influencer' na Max Factor Arabia na-ekwupụta na ọ ga-akwụsị ọrụ ọ bụla ga-eme n'ọdịnihu na onye na-eme ihe nkiri.
Ndị nkatọ ka na-erute ọtụtụ ụdị mara mma ndị ọzọ na mgbasa ozi mmekọrịta ma na-agba ha ume ka ha kewapụ onwe ha site na blogger mara mma, gụnyere MAC, Shishido, Anastasia Beverly Hills na Etudes House.
Ndozigharị iji kpuchido ikike ndị ọrụ bekee Filipino na Kuwait ka ewebatara na Mee ka ọnwa ole na ole mkparịta ụka kpụ ọkụ n'ọnụ gasịrị n'etiti mba abụọ ahụ. Ihe kariri 250,000 ndi Filipinip bi na mba Gulf, nke opekata mpe pasent 60 bụ ndị ọrụ ụlọ na-ebi ma na-arụ ọrụ n'ụlọ ndị were ha n'ọrụ.
Ntugharị iji melite ikike ndị ọrụ ụlọ gbanwere mgbe Philippines nyere iwu mgbochi nwa oge maka ndị ọrụ ịga Kuwait mgbe achọtara Joanna Demafelis dị afọ 29 n'ime ngwa nju oyi nke ndị ọrụ Lebanọn ya. Kemgbe ahụ, a mara ha ikpe ọnwụ.
Onye Isi Nchịkọta Ọrụ
Onye isi nchịkọta ọrụ bụ OlegSziakov
Okwu ego: London Heathrow chọrọ ọgwụ mgbochi ...
Onye minista na -ahụ maka njem na Jamaica na Dominican Republic zutere ...
Kacha ọhụrụ na United States, UK, EU ndụmọdụ na alaeze nke Eswatini ...
Egwu? Flight Air320 AXNUMX si Delhi na Kabul ọ bụ ụgbọ elu
Ijeri $ 15.39: ahịa mgbazinye ụgbọ ala China bụ ...
Ala ọma jijiji 7.1 siri ike na Acapulco, Mexico…
Ọrịa COVID dị ugbu a na Ebe ezumike Ezumike
IMEX America Smart Monday keynotes gosipụtara dọkịta ...
Jet Airways 2.0: ụgbọ elu ọhụrụ
Sandals Royal Curaçao bụ ozi ọma maka njem nlegharị anya Curacao
Bahamas na -anabata njem ụgbọ mmiri Crystal Cruises ọhụrụ ...
3 ikpe COVID-19 ọzọ enwetara na New Zealand
Russia kwụsịrị njedebe na ụgbọ elu na Egypt ...
'Rome nke Britain' nwere ike tufuo UNESCO ...
Ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 dị mkpa ugbu a maka Air Canada niile ...
Iwu US na Nkwupụta Nnwere Onwe ugbu a ...
Ezuru data nkeonwe ndị njem na Bangkok Airways ...
Mmefu njem na -abata na North America gbadara site na 74.1%...
Ebe ezumike US kachasị na nke dị ọnụ ala
Skal Roma na Skal Bucharest: Twinning mbụ nke Skal ...
Ndị njem ụgbọelu nke America na-anwa imepe Ọnụ ...zọ ...
Ụgbọ elu ụgbọ elu India dị ọnụ ala nke ukwuu nwere ike bụrụ ihe ọma maka ...
Ihe dị ọhụrụ na Bahamas n'August
WestJet chọrọ ugbu a ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 zuru oke maka mmadụ niile…
Japan kwupụtara ọnọdụ mberede COVID-19 n'ime asatọ…
Ụgbọ mmiri na -ebufe mmiri na -ekpu n'akụkụ agwaetiti Canary, mmadụ 52 ...
WHO ekwuputala arịrịọ ngwa ngwa ijeri US $ 7.7 iji kwụsị ...
Onye Etiopia na-eduga Africa na njem na ibu ...
Ndị Taliban chọrọ ka Turkey rụọ ọdụ ụgbọ elu Kabul
Agwaetiti ndị nwụrụ anwụ na -enweta nde 1.3
Ndị nnọchi anya njem US: iwu njem mba ofesi na -agbanwe ...
Seychelles zuru “The World's Top Ten Gorgeous ...
Bras na panti 730: E jidere onye ohi uwe ime n'okpuru ...
IATA weputara nkuzi banyere gburugburu ebe obibi ...
Hurricane Henry na nkuzi nkuzi na New York
IATA kwadoro European Digital COVID Certificate dị ka ...
Ndị ọrụ ụgbọ elu America na -enweghị mkpuchi ihu na -enweta COVID nọ na…
Ogbugbu dị egwu na Tanzania: onye oji egbe anwụọla
Carnival Cruise Line ka ịmalitegharịa ụgbọ mmiri ndị ọzọ na ...
Eswatini jidere n'etiti Taiwan na China pụtara nnukwu ...
Netherlands weghachite mgbochi COVID-19 n'etiti ọhụrụ ...
Etù IMEX na-ekpughe ihe nzuzo
Blossom Hotel Houston ga -amalite mpụta mbụ ya na ngwụcha oge ọkọchị
A kagbuo ụgbọ elu niile, ọdụ ụgbọ mmiri emechie ka ihe nkwado Shanghai ...
Hawaii COVID-19 Ọrịa: Otu Ndekọ Dị Elu Mgbe ...
Ịkpọasị UNWTO maka WTTC gụnyere Ịhụnanya Tweeted ...
Nnukwu ego maka Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Volotea ...
Ndị bi na Sydney ga-ebu ID iji gosi na ha bụ ...
Brunei machibidoro nbanye niile site na Indonesia mgbe ebubachara ...
Qatar Airways bụ onye otu ọhụrụ ICAO Global Sustainable ...
Kedu ihe kpatara ndị Costa Ricans niile ji bụrụ Nhọrọ?
Njem Nleta Ọnwụ: Njem na ebumnuche
Atlantic Canada ga -emepe ndị njem US ọgwụ mgbochi
Sandals Resorts International na-echeta onye guzobere ...
Iwu nkpuchi nkpuchi njem nke US ga -agbatị n'etiti etiti…